सर्पको टोकाइबाट वृद्धाको मृत्यु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सर्पको टोकाइबाट वृद्धाको मृत्यु
राजविराज । सप्तरी महदेवा गाउँपालिका–४ मा सर्पको टोकाइबाट आज एकजना वृद्धाको मृत्य भएको छ। मृत्युहुनेमा सोहि ठाउँबस्ने ६० वर्षीया मूर्तिदेवी राम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
घर नजिकै धान खेतमा काम गर्ने क्रममा उनलाई सर्पले टोकेको थियो । सर्पको टोकाइबाट सिकिस्त भएकी रामलाई राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। केही दिनयता बढेको अत्यधिक गर्मी र बाढीका कारण पूर्वी तराई मधेशमा सर्पको बिगबिगी बढेको पाइएको छ।